Yedu Remangwana Vagadziri
Kudanwa Kunobva Kune Vanhu
Iyo UnCommission mukana wakakura, wakasiyana, uye wekutora chikamu kuburikidza iyo 600 vechidiki vakagovana zviitiko zvavo kuti vaone maitiro-akagadzirira kufunga nezveramangwana reSTEM kudzidza nemukana.
Kubva munyaya idzi, maonero matatu akabuda ayo anonongedza nzira yekuwana dzidzo yeSTEM yakaenzana yevana vese venyika yedu, kunyanya kunharaunda dzevatema, dzeLatinx, nedzeNative America.
Vechiduku havana kukanda mapfumo pasi; vakadzingwa uye vanoda kuita mutsauko neSTEM.
Izvo zvakakosha zvakanyanya kuti vechidiki vanzwe pfungwa yekuve vari muSTEM.
Vadzidzisi ndivo simba rakasimba kwazvo rekukurudzira kuve muSTEM.
Makore (makore epakati)
Mukadzi kana asiri mabhinari
zvevatauri venyaya vakanzwa kubva a
mukuru anotsigira nezvenyaya yavo
States, kusanganisira Washington, DC
Inzwa nyaya dzavo
Maonero kubva kuunCommission vatori venhau vedu vari kutungamira 100Kin10'makore gumi anotevera-refu chikamu chebasa kuburitsa chizvarwa chinotevera chevagadziri uye vanogadzirisa matambudziko. 100Kin10, iyo yakatanga muna 2011 mukupindura Mutungamiri Obama kudana kwe100,000 nyowani, akanakisa STEM vadzidzisi mumakore gumi uye vakapfuura chinangwa ichi muna 2021, tinotarisira kutora izvo zviri kubuda kubva kuUnCommission sechinangwa chedu chinotevera chekugovana, chenyika. 100Kin10's chinangwa chitsva uye network ichavhurwa mukudonha kwa2022.
Une mubvunzo? Email unCommission@100Kin10.org